December 2021 – All Update News
အိမ်ထောင်ကျပြီး ၁၃နှစ်အတွင်းကို သားသမီး ၁၆ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခေတ်သစ် ရှင်မွေးလွန်း ကလေးထပ်ယူဉီးမှာတဲ့နော်
December 31, 2021 December 31, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
Unicode လောကကြီးတွင် မိဘများအတွက် သား သ မီးရှိခြင်းကို ရတနာတစ်ပါးဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်ရိုလိုင်းနားတွင် နေထိုင်သော Petty အမည်ရှိသော အ သက် ၃၉နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးသည် အိမ် ထောင်ကျပြီး ၁၃နှစ်အတွင်းကို သားသမီး ၁၆ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနေပြီဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကလေး …
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အနုပညာရှင်များ၊ ဆယ်လီများ၊ အဆိုတော်များကို စစ်ကောင်စီက အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်များ အသီးသီးချမှတ်ပရိတ်သတ်များ ရင်ကျိုးရသော နေ့
December 30, 2021 December 30, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အနုပညာရှင်များ၊ ဆယ်လီများ၊ အဆိုတော်များကို စစ်ကောင် စီက အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်များ အသီ းသီးချမှတ် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ မင်းသားပြေတီဦး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးကို ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးတွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောငဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်သည်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို …
မိန်းမချောချောလှလှလေးရဖို့အတွက် ကိုယ်ကရုပ်ချောနေဖို့မလိုပဲ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အကြိုက်က ဘာဆိုတာ သက်သေပြခဲ့သူ ရုပ်အဆိုးဆုံး အမျိုးသား
Unicode ရုပ်ဆိုးလို့ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်နေတဲ့သူတွေရှေ့မှာ သူဌေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးကောင်မလေးချောချောလေးကို တွဲပြလိုက်တဲ့ အမျိုးသား လူတွေတချို့ဟာရုပ်ဆိုးနေတဲ့လူတွေဆိုလှောက်ပြောင်ကြပြီး လူရာမသွင်းကြပေ။ ရုပ်မချောပေမယ့်ငွေဂုဏ်ပကာသနရှိနေရင်သင်ဟာဘာမှမပြုပြင်စရာမလိုဘူး လူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသင်ဟာ လှနေပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အမျိုး သားတစ်ဦးဟာ ရုပ်အရမ်းဆိုးလွန်းနေသေ ာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုနောက်ပြောင်ရုံသာမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း သူ့ပုံယူပြီး အပျော်တမ်းစနောက်ခဲ့ပါတယ်။ . စနောက်တဲ့သူတွေဟာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် စနောက်ခံရတဲ့ထိုအမျိုးသားဟာ …
ငါးကင် ငါးပေါင်း လုပ်နည်း ၄မျိုး နှစ်သစ်ကူးနီးလာပြီမို့ ကြိုက်ရာနည်းနဲ့ လက်စွမ်းပြကြမယ်
December 29, 2021 December 29, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
ငါးကင် ငါးပေါင်း လုပ်နည်း ၄မျိုး 1. ထိုင်း ငါး ဆား မီး ကင် လုပ် နည်း ဒီတစ်ပါတ် တင်ပြ ပေး မှာ က တော့ မြန်မာ လူ မျိုး များ နှင့် သိပ် မစိမ်း သည့် ငါး ဆား …
မဟူရာသည် ကျစ်လျစ်မာကြောသော ကျောက်သလင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းသည်ကျောက်ခေါင်းများ ထဲရှိ သဲစင်ထပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိသည်။ မဟူရာကျောက်သည် သံမဏိထက် အနည်းငယ် မာသော် လည်းသံမဏိထက်ပိုဆတ်သည်။ မဟူရာသည် အရောင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် အစင်းများထင်လျက် ရှိသည့်ပြင် သွေးလိုက်သည့်အခါအလွန်အရောင်တောက်ပြောင်လာနိုင်သည်။ မဟူရာသည် အမည်းရောင်ဟုအများစုသိကြသော်လည်းမဟူရာကျောက်တိုင်းတော့အမည်းရောင်မဟုတ်။ အချို့မဟူရာကျောက် များသည် အစင်းများဖြစ်၍အချို့ကားလုံးချင်း မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်၊ သို့ မဟုတ်အမည်းရောင်များ …
သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ရေဆင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (ရေဆင် ရရင် ထီပေါက်စရာ မလိုတော့ပါ)ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲသိချင် ဝင်သာဖတ်ပြီး ဝေမျှပါ
သိန်းထောင်ချီ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ရေဆင်အ ကြောင်း သိကောင်းစရာ (ရေဆင် ရရင် ထီ ပေါက်စရာ မလိုတော့ပါ) ဆင်သမားတစ်ယောက် ဆင်စီးရင်း ချောင်းနိမ့်တစ်ခုကိုဖြတ်ရာတွင် ဒုက္ခနှင့် လှလှ တွေ့နေသည်။ ဆင်ကိုချွန်းနှင့်ဘယ်လို ဆွဆွ၊ ပါး စပ်မှအော်ပြီးဘယ်လို လှန့်လှန့် ဆင်က ချောင်းကိုမဖြတ်၊ ချောင်းစပ်တွင်သာရပ်၍ တဝူးဝူးအော်နေသည်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်… မြန်မာနိုင်ငံ …
ခါးနာခြင်း(Back Pain)အတွက် ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်နှင့် ကုထုံးများ လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်
December 27, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
ခါးနာခြင်း(Back Pain) ခါးနာခြင်း ဆိုတာဟာ ကျောနောက်ဖက် ကြွက်သား နာဗ်ကြော အရိုး အရိုးဆက်အ ကြားကြားခံအရွတ် ကျောရိုးဆစ် စသဖြင့် နေရာတစ်ခုခုက နာကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တစ်ရက်အလေးအပင်မခြင်း အထိုင်အ ထ မူမမှန်ခြင်း အညောင်းကြာရှည်ထိုင်အ လုပ်လုပ်ရသူများ Highway ကားမောင်းသူ များ မီးအပူနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရသူ များ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ …
တက္ကစီဆရာလေးရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စိတ်ထားလေး ဒါကြောင့် လူကြီးသူမတွေ ပြောကြတာပေါ့ ရိုးသားမှုဂုဏ် စားမကုန်လို့
Unicode မနေ့ကအဖြစ်ပျက်လေးပေါ့ ရိုးသားမှုအ တွက် ဂုဏ်ပြုချင်လို့ပါ။ မနေ့ကအိမ်က အဖေမွေးနေ့မလို့ညီမနှစ်ယောက်ကျောက်မြောင်းကိုဖုန်းသွားဝယ်ကြတယ် ပြန်လာတော့ကျောက်မြောင်းဘက်ကနေတက္ကစီဌားစီးလာကြတာ လက်မှာထဲအထုတ်တွေနဲ့လက်တွေကမအား အမကလည်းပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ဖုန်းကိုအိတ်ထဲထည့်တာဘဲ ‌ချော်ကျပြီးကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့ရော အိမ်ကအမကပိုက်ဆံအိတ်မေးကြတော့ အိတ်တွေထဲရှာတာမတွေ့ ဖုန်းဆိုင်ကိုပိုက် ဆံအိတ်ကျန်ခဲ့လား ဖုန်းဆက်မေးကြရော လူတွေကပြာယာကိုခတ်ပြီးဖုန်းတွေဆက် ပထမကဖုန်းကဝင်တယ်မကိုင်ဘူး နောက် ထပ်ဆက်မှကိုင်တော့ ညီမရေ ညီမဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကားပေါ်ကျန်ခဲ့တယ်နော် အစ် ကိုပုဇွန်တောင်ဘက်ရောက်သွားလို့အိမ်အ ထိလာပေးမယ်နော် ခဏစောင့်ဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်ရော …
အိမ်မှာသားလေးကို ထားခဲ့ဖို့စိတ်မချ၍ စက်ဘီးရှေ့ခြင်းလေးတွင်ထည့်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ဖခင်တစ်ဦး အဖေပီသလွန်းတဲ့ အဖေတစ်ဉီး
Unicode ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အသက်၂၀ကျော်အရွယ် ကောင်လေးသည် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်လည်းမရှိသေးတာကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ဦး လေးအိမ်မှာ ကပ်နေခဲ့ရသည်။ ဦးလေးအိမ်မှာ နေရသည့်အတွက် သူတို့ဇ နီးမောင်နှံသည် လစဉ်အသုံးစရိတ်ကို ပေးအပ်ရကာ ကလေးတစ်ယောက်ပါပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် တစ်ယောက်တည်းလုပ်စာနဲ့ မလုံလောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် အ ပြင်အလုပ်ထွက်လုပ်ကာ သားလေးကိုအိမ်မှာ ထားခဲ့ဖို့ရာလည်း …